Wesley Sneijder oo ka gadoodsan mushaarkiisa Inter Milan. - Caasimada Online
Home Warar Wesley Sneijder oo ka gadoodsan mushaarkiisa Inter Milan.
Wesley Sneijder oo ka gadoodsan mushaarkiisa Inter Milan.
Ciyaaryahanka Manchester United diirada u saaran Wesley Sneijder ayey kooxdiisu u sheegtay inuusan u ciyaari doonin mar kale hadii uusan dhimin mushaarkiisa 200 kun oo ginni isbuucii, sida uu qoray wargesyka Daily Mail.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee dalka Holland ayaa diiday inuu aqbalo heshiis cusub ka dib sabababo mushaarkiisa Inter ah, wuxuuna agaasime Marco Branca ciyaaryahanku si cad ugu sheegay in kooxda Talyaaniga aysan aqbali Karin qandaraas cusub oo uu mushaarkaan kaga qaadanaayo.
Sneijder, oo kooxdii Inter ee tababare Jose Mourinho ku hugaamiyey guushoodii taariikhiga aheyd ee Champions League iyo Serie A, waxaana aad u doonayey kooxo badan, marka lagu daro United intii lagu jiray xagaaga, laakiin tababare Sir Alex Ferguson ayaa xidigaan heshiis la gaari waayey sababtoo ah mushaarkiisa sare.
Laakiin hada waxay u muuqataa in ciyaaryahanka reer Holland janaayo suuqa la geyn doono hadii xal loo waayo in laga saxiixo qandaraas cusub oo ku heynaya Milan, mushaarkiisana la dhimi waayo.
28 jirkaan ayaa kooxdiisa u saxiixay heshiis shan sano ah oo uu isbuucii ku qaadanayo 200 kun oo ginni waana 2010kii.